Cristiano Ronaldo oo xaqiijiyay inuu ka sara maray Lionel Messi kaddib saddexleeydii uu ka dhaliyay kooxda Cagliari – Gool FM
Cristiano Ronaldo oo xaqiijiyay inuu ka sara maray Lionel Messi kaddib saddexleeydii uu ka dhaliyay kooxda Cagliari
(Turin) 07 Jan 2020. Cristiano Ronaldo ayaa xalay ku noolaa habeen aad u qurux badan ee muhiim ah bilawga sanadka cusub ee 2020, kaddib markii uu dhaliyay saddexleydiisii ugu horeysay horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga tan iyo markii uu yimid kooxda Juventus.
Juventus ayaa guul ay u qalantay kaga gaartay kooxda Cagliari garoonkeeda Allianz, kaddib markii ay kaga adkaatay 4-0, ciyaar ka tirsaneyd kulamada 18-aad horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga.
Cristaino Ronaldo ayaa inta kulankan uu socday wuxuu dhaliyay saddexleydiisa ugu horeysay ee sanadkan cusub 2020, wuxuuna sidoo kale caawiyay goolkii uu dhaliyay saaxiibkiis Gonzalo Higuain.
Haddaba saddexleydan uu dhaliyay Cristaino Ronaldo ayaa waxay ka dhigan tahay inuu sameeyay rikoorro badan ee taariikhi ah oo marba dhinacyo kala duwan laga eegayo.
Shabakada “Opta” ee ku caan baxday inay u kuur gasho rikoorada iyo tirakoobyada ciyaartoyda iyo kooxaha kubadda cagta ayaa waxay muujisay in Cristaino Ronaldo uu xalay xaqiijiyay inuu ka sara maray Lionel Messi, kaddib saddeleeydii uu ka dhaliyay kooxda Cagliari.
Cristaino Ronaldo ayaa dhaliyay shalay dhaliyay saddexleeydiisii 36-aad xirfadiisa ciyaareed ee kubadda cagta dhamaan horyaalada kala duwan uu ka soo ciyaaray.
Lionel Messi ayaa labaad kaga jira rikoodhkan, kaddib markii uu kooxdiisa Barcelona u dhaliyay 34 goolasha saddexleeyda ah, halka Luis Suarez uu kaalinta saddexaad ka soo galay liiskan isagoo dhaliyay 16 saddexleey, iyo xiddiga kooxda Manchester City ee Sergio Aguero oo isna dhaliyay 14 seddexleey.
Pierre-Emerick Aubameyang oo balan qaad adag u sameeyay Taageerayaasha kooxda Arsenal
Guardiola oo ka hadlay xaallada dhaawaca Leroy Sane & xilliga uu dib ugu soo laabanayo garoomada